နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကင်မရာလမ်းအလင်း China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ကင်မရာလမ်းအလင်း,အဆိုပါ Wi-Fi ကင်မရာလမ်းအလင်းစောင့်ကြည့်,full-featured ကင်မရာလမ်းအလင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး > ကင်မရာအလင်းများ > နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကင်မရာလမ်းအလင်း
အဆိုပါကင်မရာကိုလမ်းမီးခှကျကယျြပွနျ့စှာဆိုက်၏အကြီးစား hd ကိုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်အတွက်သုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကွန်ရက်ကမြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျအသိဉာဏ်ဘောလုံးကိုရဲ့အမျိုးမျိုးသော features တွေသုံးစွဲဖို့အသုံးပြုသည်။
ကင်မရာမီး, ကင်မရာမီးလှုပ်ရှားမှု, ရောင်းရန်ကင်မရာအလင်းများ, အလင်းများကင်မရာအရောင်, ကင်မရာလမ်းအလင်း။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း, solar လမ်းအလင်းဝင်ရိုးစွန်း, solar လမ်းအလင်းဘက်ထရီ, solar လမ်းအလင်းကောင်းကျိုးများ
1. စမတ်သဲလွန်စ: ဒါဟာလက်စွဲစာအုပ်သဲလွန်စ full-ရှုထောင့် tracing, အဖြစ်အပျက် tracing နှင့်အခြား tracing မော်ဒယ်များကိုတောင် Multi-မြင်ကွင်းတစ်ခုခရုဇ်သဲလွန်စ function ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
2. စမတ်စစ်ဆေးရေး: ဒါဟာ, ဝင်ပေါက်ဧရိယာကျူးကျော်, စစ်ဆေးခြင်းကျူးကျော်နယ်စပ်ဖြတ်ကူး, စစ်ဆေးခြင်းကျူးကျော်ဧရိယာ, မကျြနှာကိုဖော်ထုတ်ခြင်းထောက်ခံပါတယ်ထွက်ပေါက်ဧရိယာကျူးကျော်, စစ်ဆေးခြင်းလှည့်လည်, စစ်ဆေးခြင်း, အစာရှောင်ခြင်း-ရွေ့လျားစစ်ဆေးရေး, ယာဉ်ရပ်နားစစ်ဆေးခြင်း, စစ်ဆေးခြင်းမေ့ဥစ္စာစုဆောင်းလူများ, ဥစ်စာရှိစစ်ဆေးရေးတောင်းဆို အသံပုံမှန်မဟုတ်သောစစ်ဆေးခြင်း, မိုဘိုင်းစစ်ဆေးရေးနှင့်ဗီဒီယိုအမိုးအကာ function ကို။
3. စမတ်လမ်းမကြီး Monitor: ဒါဟာမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ပန်းကန်ဖမ်းခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း၏ function ကို, Multi-မြင်ကွင်းတစ်ခုခရုဇ်စစ်ဆေးခြင်း, Cloud သိုလှောင်မှု Service ကိုရာထူးအမည်ထောက်ခံပါတယ်။
4. စမတ်ဗီဒီယို: ကနှစ်ကြိမ်ထောက်လှမ်းရေးရှာဖွေ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စုစည်းကစားပွီးမွောကျစမတ် NVR နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောဗီဒီယို, ကြိုတင်ယူထားရန်အလို့ငှာ off-ဇယားကွက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်၎င်းသည်အစဉ်အမြဲတင်ပို့ထောက်ခံပါတယ်။
5. စမတ်ဓာတ်ပုံစွမ်းရည်မြှင့်: ဒါဟာ Over-ထိတွေ့နည်းပညာလျှပ်စစ် Anti-လှုပ်, Smart မှာ IR Anti-အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်သည်မြူ, အလင်းဖိနှိပ်မှုကိုထိုးဖောက်ဖို့ထောက်ခံပါတယ်
6. စမတ် encoding: ဒါဟာ code နဲ့ Self-adapter နိုင်တဲ့ coding နည်းပညာတိုးမြှင့်နိမ့်ကုဒ်နှုန်းရွယ်စိတ်ဝင်စားဧရိယာထောကျပံ့
7. မတ်သတိပေးချက်: ဒါဟာချွတ်-ဇယားကွက်ပြဿနာ, အိုင်ပီလိပ်စာပဋိပက္ခ, အပြည့်အဝသိမ်းဆည်းခြင်း, အယူမှားသိုလှောင်မှုနဲ့တရားမဝင်အလည်အပတ်ခရီးပုံမှန်မဟုတ်သောစစ်ဆေးရေးသတိပေးဖြေရှင်းဖို့ထောက်ခံပါတယ်။
8. 30000hours အထိအဆိုပါစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိဆားကစ်ဒီဇိုင်း, ဆီမီးခွက်ဘဝ
System ကို function ကို
1. အာရုံခံကိရိယာ၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်, image ကိုထရန် 1920x1080 အများဆုံး resolution ကိုရှင်းပါတယ်
2. API ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ interface ကိုစံ, ထောက်ခံမှု SDK ကို, ONVIF, Kang CGI, PSIA, GB ကို / T28181 နှင့် E ကို access ကို protocol ကိုထောကျပံ့
3. , PAL / NTSC system ကို switching ထောက်ပံ့ကောင်းသောဒေသဆိုင်ရာသက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်
အဆိုပါ DVR / / IE ကို client software များနှင့်အတူ 3D အသိဉာဏ် positioning ကို function ကိုအဘို့အ 4. ပံ့ပိုးမှု, အခြေရာခံနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ချဲ့ရန်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်
ဒေတာပါဝါကိုသေချာစေရန် 5. ပံ့ပိုးမှုစနစ်ကနှစ်ဆ backup လုပ်ထား, ပျောက်မဟုတ်ပါဘူး
ပါဝါပေါ်ပြီးနောက် 6. ပံ့ပိုးမှုအာဏာကိုချွတ်ပြည်နယ်မှတ်ဉာဏ် function ကို, အ PTZ မတိုင်မီချွတ်ပါဝါမှအလိုအလျှောက်ပြန်လာနှင့်မှန်ဘီလူးပြည်နယ်
7. Lightning ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ကာကွယ်တားဆီးရေးမြင့်တက်, ဆန့်ကျင်မြင့်တက်, IP66 ကာကွယ်မှုအဆင့်
8. , optional ကိုအချိန်ကိုက်တာဝန် mode ကိုများစွာသောမျိုးအချိန်ကိုတာဝန် function ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
လပ်ြရြားမြ function ကို
1. အဆ 20 optical zoom, 16 ကြိမ်ပံ့ပိုးမှု PCM အရည်အသွေးမြင့်အသံနိုင်တဲ့ coding
2. ပံ့ပိုးမှုအလိုအလျောက်မျက်ဝန်း, အလိုအလျောက်အာရုံ, အလိုအလျောက်အဖြူချိန်ခွင်လျှာ, နောက်ခံအလင်းလျော်ကြေး, ကျယ်ပြန့် dynamic range ကို, 3D ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆူညံသံလျှော့ချရေး
3. အစွန်းရောက်အနိမ့်အလင်းပံ့ပိုး, 0.02ux / F1.6 (အရောင်), 0.002Lux / F1.6 (Hei Bai), IR နှင့်အတူ0င် Lux
ဒေသဆိုင်ရာထိတွေ့ခြင်း4ပံ့ပိုးမှု, ဒေသဆိုင်ရာအာရုံစိုက် function ကို
5. ပံ့ပိုးအနား privacy ကို, Multi ဧရိယာ, Multi အရောင် mosaic, optional ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
Network မှ function ကို
1. Ethernet ဟာထိန်းချုပ်မှုထောက်ပံ့နဲ့ Analog output ကိုထောကျပံ့
SD / SDHC / အဆင့် SDXC 64G ကဒ်သိုလှောင်မှုအတွက် 2. အများဆုံးထောက်ခံမှု
coding 3. ပံ့ပိုးမှု PCM အရည်အသွေးမြင့်အသံ
4. ပံ့ပိုးမှု NAS ဗီဒီယိုအားသိုလှောင်မှု, ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကိုဒေါင်းလုဒ်, အများဆုံး 8NAS disk ကိုထောကျပံ့ကျိုးပဲ့နိုင်ပါသည်
5. ပံ့ပိုးမှုသုံးခုအသုံးပြုသူအခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှု, အခွင့်အာဏာအသုံးပြုသူနှင့် password ပံ့ပိုး HTTPS ကိုစာဝှက်စနစ်နှင့်ကို IEEE 802.1X ကွန်ယက်ကို access ကိုထိန်းချုပ် IP address ကို filtering ကိုထောကျပံ့
7. ပံ့ပိုးမှုကဗီဒီယို H.264 / MJPEG / MPEG4 ချုံ့ algorithm ကို, Multi level ကိုဗွီဒီယိုအရည်အသွေးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ, ရှုပ်ထွေးအခြေခံ / ပင်မ / အမြင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို coding ထောက်ခံမှု H.264 ကို support နှင့် hdtv1080p အတွက်စံ SMPTE296M ၏ Real-time video output resolution ကိုထောကျပံ့ပေး (စံ smpte274m နှင့်အတူ ), 960p
နှင့် HDTV720p (USMC)
8. ပံ့ပိုးမှု 1 အသံဖိုင် input ကိုနှင့်ချန်နယ် 1 အသံ output ကိုစောင်း function ကို
9. 360 ဒီဂရီ Horizontal စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်း, ဒေါင်လိုက်ဦးတည်ချက် (-2 ~ -90 ~ -10 ~ -90 ~ optional ကို), အဘယ်သူမျှမကျြစိကနျးအစက်အပြောက်စောင့်ကြည့်မှု
10. 240 ° / s အထိကြိုတင်အမြန်နှုန်း 200 ° / s အထိဒေါင်လိုက်ကြိုတင်အမြန်နှုန်း၏အဆငျ့, အမြန်နှုန်းနှိပ်ရင်တွေ့နိုင်၏အဆငျ့ 0.1 ° -160 ° / s ကိုဖြစ်ပါသည်, ဒေါင်လိုက်နှိပ်ရင်တွေ့နိုင်မြန်နှုန်း 0.1 ° -120 ° / s နဲ့ဖြစ်ပါတယ်
11. ပံ့ပိုးမှု 300 ကြိုတင်ရာထူးနှင့်ကြိုတင်ဗီဒီယိုကအေးခဲတဲ့ function ရှိပါတယ်
12. ပံ့ပိုးမှု 8 ခရုဇ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့, တစ်ဦးချင်းစီက 32 ကြိုတင်အချက်များကိုပံ့ပိုးမှု4ပုံစံစကင်ကို add နိုင်ပါတယ်, အချိန်မှတ်တမ်းတင်တစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်းကိုမိနစ် than10 ပို
built-in7နှိုးဆော်သံ input ကိုနှင့်2နှိုးဆော်သံကို output, ထောက်ခံမှု alarmfunction 13. မှန်ဘီလူး function ကိုနှင့်ထောက်ခံမှုအချိုးအစားပံ့ပိုးမှုနှိုးဆော်သံ function ကို,
14. အနီအောက်ရောင်ခြည်ကွန်ရက်က HD ကိုစမတ်ဘောလုံး၏ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်မြင့်မားတဲ့အဓိပ်ပါယျစောင့်ကြည့်က်ဘ်ဆိုက်များ၏ကျယ်ပြန့မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နိုင်အောင်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး > ကင်မရာအလင်းများ
LED ကို Hight-ရွက်တိုင်မီးအိမ်စီးရီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LED ကိုရေအောက်မီးအိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LED ပွိုင့်အလင်းရင်းမြစ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကင်မရာလမ်းအလင်း အဆိုပါ Wi-Fi ကင်မရာလမ်းအလင်းစောင့်ကြည့် full-featured ကင်မရာလမ်းအလင်း Led ကပ်သီးကပ်သတ်အလင်း စမတ်လမ်းအလင်းစနစ်